नायिका स्वोस्तिमा खड्काले काटिन 15 करोडको केक, बिशेष के थियो? (भिडियो सहित) - Samachar Post Dainik
नायिका स्वोस्तिमा खड्काले काटिन 15 करोडको केक, बिशेष के थियो? (भिडियो सहित)
काठमाडौ। युट्युब प्रयोगकर्ताहरु यतिबेला नेपालमा बढिरहेका छन्। कुनै समय युट्युबका विभिन्न च्यानलमा अन्तरबार्ता दिन हौसिने कलाकारहरू आजकाल आफै युट्युबर भएको यथार्थ छ।
कोरोनाले सिने क्षेत्र ठप्प भएपछि आम्दानि र फुर्सदको सदुपयोग पनि हुने संगै आफ्ना फ्यानहरुसंग जोडिईरहनको लागि एउटा गतिलो बहाना समेत बनेको छ।
यता सिने र संगीत उधोगको लागि युट्युब एउटा ठूलो प्लेटफर्म भएको छ आफ्नो प्रतिभा तथा उत्पादित भिडियो दर्शकमाझ सिधा पुर्याउनको लागि।
ट्रेन्डिङ, भ्युज संगै रेकर्ड ब्रेकको होडबाजी त हेर्न लायक नै हुन्छ। यस्तैमा एकसुरमा भ्युजको रेकर्ड ब्रेक गर्दै गइरहेको ‘कुटुमा कुटु’गीतको भिडियोले फेरि पनि रेकर्ड ब्रेक केही दिन अघि गरेको छ।
१५ करोड भ्युज पुगेपछि युट्युब नेपालमा सर्वाधिक हेरिएको गीतको भिडियो बनेको छ। रेकर्ड पछि स्वस्तिमा खड्का दङ्ग नहुने त कुरै भएन। यहि गीतमा ठुम्का हानेपछी उनको करियरमा लक लागेको हो भन्दा फरक पर्दैन। गीतको यो रेकर्ड पछि उनको हातमा १५ करोडको केक देखिएको छ।
ईन्स्टाग्राममा २ तस्विर सार्बजनिक गर्दै उनले खुसी साटेकी छन्। यो समाचार तयार गर्दैगर्दा सम्म कुटुमा कुटुको भिडियोलाई १५ करोड ४७ लाख ७२ हजार १ सय ८५ पटक हेरिएको छ ।
दिनप्रतिदिन यो गीतको भिडियो भ्युज अहिलेको अवस्थामा पनि बढिरहेको छ। चलचित्र ‘दुई रुपैयाँ’ मा समावेश यो गीतलाई युट्युबमा आएको भ्युज नेपालको जनसंख्या भन्दा कयौ गुणा बढी हो।
यो गीतको भिडियोको सम्पुर्ण छायांकन प्रदेश १ को मोरङमा अवस्थित गोकुलम रिसोर्टमा गरिएको थियो।
४ बर्षे युट्युब यात्रा गरिसकेको गीत राजनराज सिवाकोटीले तयार पारेका हुन् ।
आजसम्म कुनै नेपाली गीतलाई युट्युबमा १५ करोड पटक हेरिएको रेकर्ड छैन । गीतले झैँ चलचित्र ‘दुई रुपैयाँ’ ले बक्सअफिसमा रेकर्ड नबनाए पनि पैसा भने राम्रै छापेको थियो। यो गीतका कारण पनि चलचित्रको इनिसियल बक्सअफिस बलियो देखिएको थियो।
‘कुटुमा कुटु’ गीतमा राजनलाई गायिका मेलिना राईले गायनमा साथ दिएकी छन् । प्रायः राजनराजले तयार गरेका फिल्मका गीतले युट्युबमा करोड भ्यूज बटुलेका छन्।
गीतमा अभिनेत्री स्वस्तिमासँगै अभिनेता द्वय निश्चिल बस्नेत, आसिफ शाह र बुद्धि तामाङले ठुम्का लगाएका छन् । यस गीतका गीतकार राजनराज स्वयं हुन्।
कुटुमा कुटुको यो रेकर्ड तोड्न अन्य नेपाली गीतलाई निकै समय लाग्ने देखिन्छ । तथापी केही गीतले भने पछ्याई रहेको छ। पछ्याउने पहिलो नम्बरमा पर्ने गीत हो ‘माया लुकि लुकि’।
यो गीतको भिडियोलाई पनि युट्युबमा १० करोड बढी पटक हेरिसकिएको छ। सार्बजनिकको ३ बर्ष पूरा गर्नै लाग्दा यो गीतको भिडियोले यति धेरै भ्युज बटुलेको हो। (- डिथ्री अनलाइनबाट साभार)
प्रकाशित मिति २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०९:५७